Cajal: Gawaarida Python iyo Gawaarida Webka
Dunida casriga ah, dunida ee sayniska iyo tiknoolajiyada, dhammaanba Macluumaadka aan u baahanahay waa in si cad loo soo bandhigo, si fiican loo diiwaangeliyaa oo loo heli karaa si dhakhso ah loo soo dejiyo. Sidaas awgeed waxaan u isticmaali karnaa xogtan si aan ujeeddo kasta iyo waqti kasta oo aan u baahanno. Si kastaba ha noqotee, inta badan kiisaska, macluumaadka loo baahan yahay waxaa lagu xannibay gudaha barta blogka ama goobta. Inkastoo goobaha qaar ay ku dadaalayaan in ay soo bandhigaan xogta habka qaabaysan, qaabeysan oo nadiif ah, kan kale wuxuu ku guuldaraystaa inuu taas sameeyo.
Dhaqdhaqaaqa, ka shaqaynta, burburinta, iyo nadiifinta xogta waxay lagama maarmaan u tahay ganacsiga internetka. Waa inaad xog ururisaa ilo badan oo aad ku kaydiso xogta macaamiisha si aad ula kulanto hadafyada ganacsigaaga. Waqtiga dambe ama ka dib, waa inaad tixraacdaa bulshada Python si aad u hesho barnaamijyo kala duwan, qaabdhismeedyo, iyo software si aad xogtaada uga soo kabato. Waa kuwan qaar ka mid ah barnaamijyada Python oo caan ah oo aad u fiican oo loogu talagalay in la xoqdo oo lagu ciribtiro goobaha iyo kala-soocida xogta aad u baahan tahay ganacsigaaga.
Pyspider waa mid ka mid ah qodobbada ugu fiican Python websaydhka iyo kuwa ku socda internetka. Waxaa loo yaqaanaa shabakad ku salaysan shabakad ku salaysan shabakad, taas oo fududeyneysa in aan sii wadno socodsiinta xariirka badan..Intaa waxaa dheer, barnaamijkani wuxuu la yimaadaa macluumaad badan oo xogta dhabta ah.
Iyadoo Pyspider waxaad si sahlan dib uguugu soo celin kartaa boggaga internetka ee ku guuldaraystay, bogagga shabakadaha ama blogyada iyagoo da 'ahaan u sameeya kuna fuliyaan hawlo kala duwan. Kaliya waxay ubaahan tahay labo ama seddex jeer si aad u hesho shaqadaada oo aad si fudud u uruuriso xogtaada. Waxaad u isticmaali kartaa qalabkan qaababka loo qaybiyay oo leh dhowr mashiinno badan oo shaqeeya hal mar. Waa shatiga ruqsada ah Apache 2 waxaana diyaariyay GitHub. MechanicalSoup
MechanicalSoup waa maktabad caan ah oo lagu dhajiyo maktabadda qurxinta ee caanka ah iyo waxtarka badan, oo lagu magacaabo Beautiful Soup. Haddii aad dareensan tahay in shabakadaada webka waa in ay ahaato mid sahlan oo gaar ah, waa inaad isku daydaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Waxay u sahlaysaa habka socodka taranka. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan kartaa inaad ku riixdo sanduuqyo yar ama qor qaar ka mid ah qoraalka.
Dallacaadu waa nidaam istiraatiijiyadeed oo awood leh oo ay taageerto beesha firfircoon ee horumarinta webka waxayna ka caawisaa dadka isticmaala ganacsi guul leh. Waxaa intaa dheer, waxay soo saari kartaa dhamaan noocyada xogta, soo uruurin oo u ku keydso qaabab badan sida CSV iyo JSON. Waxa kale oo ay leedahay tiro kooban oo lagu dhejiyo ama isbedelka joogtada ah si loo fuliyo hawlaha sida isticmaalka cookie, wakiilka isticmaalaha, iyo xayiraadaha xaddidan.
Haddii aadan ku qanacsaneyn barnaamijyada kor lagu sharxay, waxaad isku dayi kartaa Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser, iyo qalabka kale ee la midka ah. Ma aha qalad ah in la yiraahdo liiska ayaa ka baxsan dhamaystirka waxaana jira fursado badan oo loogu talagalay dadka aan jeclayn PHP iyo codadka HTML Source .